I Barbados ve no ho firenena Karaiba voalohany hanafoana ny fanadinana fidirana amin’ny sekoly ambaratonga faharoa? · Global Voices teny Malagasy
Prime Minister Mia Mottley: It's time for a new approach
Voadika ny 23 Jolay 2019 12:35 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, 繁體中文, English
Ny Praiminisitra Mia Mottley mikabary mandritra ny Fivoriana faha 108 (Zato taona) an'ny Fivoriambe Iraisam-pirenena Mikasika ny Asa tao Zeneva, tao Soisa, ny 19 jona 2019 lasa teo. Sary © Crozet / Pouteau, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 2.0.
Efa taonjato iray mahery izao no nisian'ny fanadinana fidirana amin'ireo Sekoly ambaratonga faharoa tao Karaiba, nolovaina avy tamin'ny fanjanahantany tamin'ny 1879 tany amin'ireo toerana sasantsasany. Na dia im-betsaka novàna sy namboarina aza izy ireny, dia mbola nitoetra hatrany ao anatin'izay ambaran‘ireo manampahaizana marobe ho toy ny fitsapàm-pahaizana tsy dia mitombina loatra sy mandreraka ny saina sy tsy mandrisika hafaliana hianatra eny amin'ireo ankizy iraika ambiny folo taona ao amin'ny faritra.
Amin'izao fotoana izao, iray farafaha-ratsiny ny governemantam-paritra miomana ny hanao zavatra mikasika an'io olana io. Araka ny filazàn'i Barbados Today, “manangasanga eny am-paravodilanitra ny fanovàna hatrany ifotony” ny rafitra fampianarana ao amin'ny firenena — anisan'izany ny fanafoanana ny fanadinana mahabe hevitra “Common Entrance”– ao anatin'ny tanjona hamoronana fahafaahana mismisy kokoa ara-pampianarana sy miralenta ho an'ireo ankizy mpianatra.
Nandritra ny fivoriana ampahibemaso tao Bridgetown renivohitra, tamin'ny 2 Jona 2019, ny Praiminisitra Mia Mottley dia nampifandray ny taham-pisian'ireo heloka bevava feno herisetra amina rafitra fampianarana izay tsy manisy lanjany ny talentan'ny tsirairay ary nolazainy fa fotoana izao hialàna amin'ny karazana fomba firoso tahàka izany.
Anatin'ny rafitra ankehitriny amin'ireo fanadinana fidirana amin'ny ambaratonga faharoa, ireo ankizy tena mahay indrindra ihany – anisan'izany ireo nahomby tamin'ny fanadinana fitsapàna – no afaka miditra amin'ireo sekoly tsara indrindra. Lasa antony ihany koa ny sarangam-piainana, satria ireo ray amandreny manana fifandraisana ara-tsosialy tsara matetika no mahita rirany mba handefasana ny zanak'izy ireo any amin'ireo sekoly andrian'ny fony. Ny hevitry ny Praiminisitra Mottley dia hoe tsy maintsy “hamoronana rafitra fampianarana iray hahatonga ny sekoly tsirairay ho sekoly mendrika” i Barbados.
Ireo antontan'isa no manohana azy. Ny valim-panadinana fifindrana ho amin'ireo sekoly ambaratonga faharoa any Barbady ny taona 2019 (BSSEE), dia manipika ny filàna fanavaozana izay mitondra amin'ny fanalaviràna ny fandaharam-pianarana tena mitodika betsaka mankany amin'ireo anjerimanontolo mba hampidirana misimisy kokoa ny taokanto sy ny fiofanana ara-teknika sy asa.
Nisy ihany koa ireo antso natao hisian'ny fampiatiana bebe kokoa an'ireo ankizy manana filàna manokana (sembana), izay matetika tsy mahazo araka ny tokony ho izy ny fanohanan'ny rafitra ara-panabeazana ho an'ny daholobe an-tanana akory.
Ny marina, matetika dia ireo sekoly tsy miankina hatrany no tafita kokoa amin'ny fanadinana, izay mampivoitra indray ny olana ara-pitaovana sy saranga. Nanambara ilay Barbadiàna mpanabe, Rhonda Blackman, fa “marobe ireo ray amandreny no mitovy hevitra hoe ny fanadinana fidirana iraisana no rafitra tokana tsy miangatra hahafahan'ny ankizy “mahantra” iray hiditra amina “sekoly tsara””, fijery iray izay nokianiny tamin'ny fanambarana fa: “Izay tena izy, tsy dia ny sekoly loatra fa izay zavatra ataon'ireo ankizy rehefa tonga any amin'ireo sekoliny avy izy ireo.” Mitaky indray ny fanombanana mitohy i Blackman hanoherana ny fanadinana tokana, ny fitsinjaràna ara-paritra, izay hanafoana “ny filaharana isan'ambaratongany” eo amin'ireo sekoly, sy ny fandaharana “midadasika sady marin-danja” mandray ho anaty kajikajy ny fahasamihafan'ny fahaizan'ireo mpianatra.
Raha tafita ao anatin'io fanandramana io ny fitantanana Mottley, ho tantara izany. Nampanantena ny hanafoana ny fanadinana teo aloha ireo governemanta hafa any amin'ireo firenena hafa ao anatin'ny CARICOM fa tsy nahomby izany. Ny marina, ny tsy fahaizana (noho ny tsy fananana finiavana) hanafoana ny fanadinana – na eo aza ireo voka-dratsiny amin'ny fahasalamana ara-tsain'ny ankizy sy ny fanomezandanja ny tenany – dia niteraka an'ireo vokany amina endrika famoahana boky fianarana sy lesona fanampiny. Ireny, avy eo, no miteraka toy ny fiaraha-mianjeran'ny daomy nalahatra, mihasimba ny fahasalaman'ireo ankizy noho ny fibabena mandroso sy miverina an'ireo kitapo be, ary kely ny fotoana hilalaovana, izay tena fantatra ho anisany mandray anjara amin'ny fivelarana ara-pahasalamana eo amin”ny fahazazana.
Mandrapahafoana ny fanadinana, na izany aza, hitohy hiaritra amin'ny fomba maro hatrany ireo ankizy, anisan'izany ny fitondràna ratsy ataon'ireo ray amandrenin'izy ireo noho ny ezaka ataony hahafahan-dry zareo ny fanadinana mba hidirany amin'ny sekoly nosafidiany. Ilay boribory vetaveta no nitondra ilay mpanoratra mipetraka ao Jamaika, Nazma Muller, hanatsiny, tsy ireo ray amandreny very fanantenana irery, fa ihany koa ireo governemanta eo an-toerana feno “ireo alika antitra tsy mety hianatra zavatra vaovao”.
Nahoana no ampaharetin'ny Ministry ny Fanabeazana ireo fanamparam-pahefana sy io fiangarana atao amin'ny ankizy io, izay tsy afaka mahatratra akory ny 99% amin'ny SEA (fanadinana fitsapàna hidirana amin'ny sekoly ambaratonga faharoa) – satria izay no ilainareo mba hidirana amina sekoly iray avo lenta. […]
Petaho any ny SEA, Fanadinana Iraisana sy ireo fiangarana rehetra izay mifindra amin'ny fanabeazana ao Karaiba. Mendrika fanabeazana tsara kalitao izay manomana azy amin'ny FIAINANA ny ankizy tsirairay, fa tsy CXC iray (Filankevitry ny Fanabeazana ao Karaiba) na asa iray ao anatin'ny governemanta [asana governemanta]. Fiainana. […] Ianaro izay mitranga ao amin'ny sehatry ny fanabeazana ao Finlandy, ao Norvezy sy any amin'ireo firenena izay ny hatsaran'ny faripiainana dia any an-tampon'ny antanan-tohatra, ary tsy lasa adala ny olona no sady tsy mikapoka an-janany. […]
Fa nahoana isika no manana rafitra iray izay mahatonga ireo zanatsika hihevi-tena ho adala raha toa izy ireo tsy tafita ho amina “sekoly tsara iray”? Fa nahoana ireo sekoly rehetra […] no tsy tsara?
20 ora izayTrinite sy Tobago